China Square cube shape khaki oo eegaya moodada daabacaadda maqaar+Kiiska qalinka qalin-qoriga polyester-ka leh oo xidhidhiyaha mugga weyn ee bacda isqurxinta ayaa hadyad weyn u fidisay ragga dumarka ah ee xafiisyada xafiisyada ganacsiga qalabka waxsoosaarka iyo alaab-qeybiyeyaasha | Camei Ele&warshadaha
Qaabka cube ee labajibbaaran khaki oo eegaya moodada daabacaadda maqaarka
Shayga NO. : 3230 Kiishashka Qalinka
20 GP Qty: 12900PCS
40 GP Qty:27800PCS
Lacag bixinta: Waxaa qoray TT
Bixinta: 20-45 maalmood
Suuqyada Dhoofinta Weyn: Yurub, Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Badweynta, Aasiya
Kiishka qalin-qoritaan ee Ca-Mei waxaa loogu talagalay in lagu kaydiyo oo habeeyo qalimaan, qalimaan, qalimaan jel, calamadaha, masaxaha, maqasyada, protractors iyo qalabyada kale ee waraaqaha. Jibbaarku si habsami leh ayuu u socdaa, polyester-ka & maqaarku waa fiican yahay laakiin ma badna. Naqshad daabacaad sawireed iyokhakimidab, boorsooyin yaryar oo ku habboon dadka da' kasta leh. Waxqabadyo badan iyo kuwo badan, sidoo kale waxaa loogu adeegi karaa sidii boorsooyin la isku qurxiyo, muraayadaha muraayadaha iyo bacaha la isku qurxiyo, kuwaas oo daboolaya baahidaada ugu badnaan.
tayada Premium-Wax ka samaysan polyester-ka adag ee xidh-xidhashada u adkaysta waxa ay ka ilaalisaa boodhka, xagashada iyo kuuskuuska.
qiimo weyn - Cabirka: 210*70*120 MM, qaab cube laba jibaaran. Is haysta marka sibidhka la dhigo, si fudud ugu geli boorsada dugsiga, boorsada dhabarka iyo kiis gaaban. Qiime weyn leh, waxay la socotaa 1 jeebab oo sibban oo waaweyn oo waxaad si fudud uga dhex arki kartaa qalabkaaga xafiisyada iyo qalabkaaga.
Naqshad qurxoon-Shaqo fiican iyo naqshad la taaban karo, is haysta, la qaadi karo, miisaan fudud welina waara.
Awood weyn- Runtii waa qol gudaha ku habboon, qalimaan, iftiimiye, qadaadiicda, furayaasha, waxyaalaha la isku qurxiyo, qalabka la isku qurxiyo iyo waxyaabo kale oo yaryar. Ma jiraan wax jeebab ah ama jeebab aan loo baahnayn oo ku jira kiiska caatada ah ee taagan, fudud laakiin shaqeeya.
Zipper jilicsan- Sipper-ka ugu sarreeya wuxuu xaqiijiyaa furitaanka iyo xidhitaanka siman. Tollida la xoojiyay waxay wanaajisaa waarta kiisas qalin-qoriyeedka. Xiritaanka siibka tayada leh, fududahay in la furo oo la xidho.
Midabada kala duwan- Waxaan leenahay midabo kala duwan si ay u doortaan, astaysto kuwa aad jeceshahay oo aad u qaaddo aad dunida madadaalo firfircoon!
Shaqooyin badan- Ku habboon in lagu kaydiyo qadaadiicda lacagta caddaanka ah, iyo qalabyada kale, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa bacaha qurxinta.
Habka farsamada- Saxanka tijaabada dhalmada ka hor–Goynta agabka–Siideynta walxaha–Tollida–Baakad
Xakamaynta tayadaHubinta agabka u qalma- Aqoon-is-weydaarsiga QC- hubinta kormeeraha wax-soosaarka- Jeegaga kormeeraha oo dhammeeyey- jeegag maamulaha bakhaarka- jeeg AQL
Hore: Khaki oo eegaya moodada daabacaadda maqaarka
Xiga: Naqshad caato ah oo ku habboon daabacaadda maqaarka
ragga dumarka ah
qalabka xafiisyada dugsiga ganacsiga ee xafiiska
Qaab laba jibaaran
daabacaadda moodada eega
oo leh xidhid siibka
Caato taam translucent grid polyester-ka isku qurxiyo...
Shabakad translucent ah oo nadiif ah oo la isku qurxiyo polyester ...
Naqshad xidhitaan sibidh-ballaaran oo furan naqshadaynta khaki oo eegaya f...
Daahfurnaanta qaab-dhismeedka dhululubo-shaqaale badan oo jaale ah...
Qaabka ubaxa shandad qalin qori polyester midab leh...
Dhalldhalaal maqaar midabo leh + PU maqaar co...